Case ntetho - Shijiazhuang YiLing Hospital
Inombolo Case enye:
Mr Xiao, iminyaka engama-67 ubudala, umhlaza wesibindi zaseprayimari, AFP1000u / ml, CT esiswini: ingxilimbela umhlaza wesibindi, kunye nefom focal, ikwanjalo nentlama khona ekunene ophantsi Vena cava kunye umthambo portal, kanye ehlasela leli philisi ewasusa subcapsular effusion, ukuqina kwesibindi, portal vein nokwandisa , cholecystitis, yokukhupha amanzi ngeenxa senyongo, omnye udakada into. Ngaphandle embolization interventional + amayeza yaseTshayina kunye nezinye iindlela zokunyanga oluhlangeneyo. Kwisiphumo sobala.
Inombolo Case ezimbini:
Fan Yusuo, into eyindoda, 57, umhlaza wemiphunga ekunene, ngezifo of carcinomas cell carcinoma, nethumba ingenela pulmonary, yaye baphulukana ithuba ukusebenza, radiotherapy nalo contraindicated.
Nika unyango kuye ehlangeneyo, inxalenye unyango lubandakanya: amayeza + Interventional + komzimba.
Ngoku ukusebenza uvavanyo CR (uxolelo ngokupheleleyo), kude kube ngoku asinde iminyaka engaphezu kwama-3, ubomi ngokuqhelekileyo.
Wang Moumou, into eyindoda, iminyaka 54 ubudala, Shijiazhuang. Ke wangeniswa kwisibhedlele ngoJulayi 2010 ngenxa antsi kwi kweqondo bakhe ubuthathaka ngaphezu konyaka omnye.
NgoJulayi 2009, isigulane wabalisa antsi leenzwane bakhe emva kuvuthela umoya-moya ekucamngceni yakhe, yaye kungekudala kwabakho antsi kuzo zombini iminwe, leyo zazingaxatyiswa. NgoSeptemba ukuya ezantsi kwi wayehambe ngezoshishino, kwabakho ifiva, icesina zintsholongwane unyango umva, isandla-unyawo iimpawu antsi ngcembe kuphuhliso proximal, ekhatshwa buthathaka, ukuhamba kwamkelekile, kwisibhedlele wephondo ukukhangela yaba lukakayi, omqolo wesibeleko kungekho ngaphandle, ukuya kwisibhedlele uxolo khangela i emqolo empontshwa wabonisa "empontshwa 2-3 neurofibroma intraspinal", yaye myoelectricity wabonisa "distal luvo angahlangani esihlunwini distal." NgoNovemba, waya kwiSibhedlele Tiantan ukwenza nemithambo esingxotyeni ithumba resection.
Postoperative Ukwehla kobunzima yaba jins-20, antsi kwi yesiqephu yaba yintsimi, ehamba ukungazinzi, umchamo eqhelekileyo, ukuphazamiseka zingqondweni, yaye kwakukho amanzi phakathi ukukhohlela, umbono binocular kunye nystagmus ezincinane tyaba, Februwari 2010 ukuya esibhedlele wephondo, Khangela myoelectricity ubonisa "ulingano , axons distal injini, izilonda myelin, imithambo-luvo yovakalelo zonakaliswe ngokupheleleyo ", zibe amabini eqhelekileyo zavusa, engaqhelekanga brainstem-ezikhalayo zashiy ezinokubakho, imvakalozwi olunyulu audiometry ubonisa luvo binaural spasm ngokwesini, yezifo" peripheral esinganyangekiyo "yasekhohlo sural luvo biopsy, une" Green-Ballie syndrome ", Ndinike ibhalbhu wesigrike idosi enkulu-, ukunciphisa hormone uqinisa luvo, ukuphucula unyango kwegazi, ukuphelisa iimpawu phlegm, ukunciphisa antsi kwi omzimba, kwakhona ukusuka ukwehla kobunzima, uhambe ngaphandle. Emva obhobhozayo, imeko luzinzile kangako, iimpawu antsi kwi iziphelo kweqondo kwakusekho ezicacileyo, ubuthathaka ngezantsi ngamadolo, lo ukuhamba yaba nkenenkene, yaye kwaba nzima ukuba eme ngamehlo uvale okanye uhamba ebusuku, ngoko weza esibhedlele yethu unyango.
Emva unyango kweeveki 4 'esibhedlele wethu: Iimpawu antsi ekupheleni izandla neenyawo iyaphuculwa, kwaye flexion yonyawo ebangeni 4, kunye nokuhamba uzinzile. Landela-up: ukuza kuthi ga ngoku akukho ukwenzeka, ubomi obuqhelekileyo kunye nomsebenzi. Ngenxa yendawo elinganiselwe asinakho, ukubonisa ngaphezulu amakhambi zethu. Ukuba ufuna ukwazi ukuba unyango oluthile, ungaqhagamshelana nathi nge email.
Ngaba umyalelo unyango amayeza Chinese kwamanye amazwe?
Ngokuphandle ukuthetha, amayeza ezilula Chinese zibonwa kwilizwe zonke, okoko nje kukho amayeza ivenkile Chinese. Noko ke, unyango Chinese inkqubo amayeza ayifumaneki aphesheya. Njengoko ziya kwenziwa kuxhomekeke kwimeko ethile isigulo sakho. Kwaye loo nto siya kucela iingxelo zakho zonyango ngexesha unxibelelwano, ukuze sibe bangahlaziya imeko yakho iinkcukacha uze wenze isicwangciso sonyango.
Yiyiphi imisebenzi ntoni amayeza Chinese na?
Ngexesha unyango yonke, amayeza IsiTshayina kudlala iziphumo zonyango zilandelayo:
1. Ukwandisa imithambo yegazi wonke umzimba
2. Ukwandisa igazi ukuhamba ezintsweni kunye nokuphucula nokuhamba kwegazi
3. igazi Elisiphilisa kunye nokususa stasis
4. Ukubonelela mzimba ezaneleyo kwaye ioksijini ukuya kwizintso
5. Ukwandisa self-kuliyeza ukukwazi kweeseli sezintso umonakalo
6. Ukuqinisa Qi, omnye eneji ebalulekileyo, emzimbeni
7. Ukuphucula izinga product kwezintso
Xa unyango kwiiveki-2, isigulane seswekile Afrika ufumene Integrated nokuphatha izinto. Bonke abasebenzi Ndiyavuya ukubona ukuba iba ngcono.
ubuchwepheshe TCM, TCM decoction, sonyango element ezintlanu-lokuqubha, amayeza entshonalanga kuyimfuneko ....
Mhlawumbi Unako ke bona Massage naphi,, yintoni esinayo Tuina, okusebenzayo enyama yangaphakathi, iinkqubo ngaphakathi, hayi yokuthanjiswa kuphela esikhumbeni okanye imisipha; mhlawumbi Uyakwazi ukubona lokugqojozwa yonke, Noko ke, yonke acupoint, macala onke, yonke ubunzulu iinaliti ukusebenza; mhlawumbi ungabona bath sonyango yonke, ke, sisebenzisa ithiyori element ezintlanu-ukukhokela, ngokusekelwe kwi imeko umzimba ethile, ukuze uncedo isigulane ngokwakhe.
Isiphumo uyakwazi ukuthetha.
Motor isifo neuron kwamaphaphu eqhelekileyo
Lateral sclerosis (ALS) iDementia Mal-isondlo